Tonizia: Nanaovana bemidina ny tranon’ilay bilaogera, norobaina ny solosainy sy ireo kapila CD · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2019 9:01 GMT
Malahelo aho milaza aminareo fa nanaovana bemidina ny tranoko ary norobaina ny 10 Aprily 2009. Nalain'izy ireo ny solosainko enti-tanana sy ireo kapila CD izay misy ny ezaka nataoko tamin'ny asako andro aman'alina. Noteren'ireo namana aho, ary nitatitra ny zava-nitranga tany amin'ny polisy, izay nanao ny fomba mahazatra amin'ny tranga toy izany.
Ny volana Septambra 2008, nametraka fitoriana ho an'ny Sampan-draharahan'ny Aterineto Toniziana (ATI) ilay bilaogera Zied el-Heni noho ny fanakanana ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy Facebook, izay naharitra roa herinandro, ary nilaza fa nanitsakitsaka ny zony hahazo vaovao malalaka ny sivana tsy ara-dalàna nataon'ny ATI. Nolavin'ny Fitsaram-paritra Fahatelo ny raharaha ny volana Novambra 2008.
Maro ireo bilaogera Toniziana nanohana ny raharahan'i Zied ary nanambara ny faha-4 Novambra (daty fitsarana ny fitorian'ilay bilaogera Zied El Heni ny Sampan-draharahan'ny Aterineto Toniziana) ho andro nasionaly ho an'ny fahalalahan'ny famahanana bilaogy .
Voasakana tany Tonizia ny bilaogin'i Zied nanomboka ny 23 Oktobra 2008. Bilaogy manokana miisa telopolo hafa ihany koa no nosakanan'ny Sampan-draharahan'ny Aterineto Toniziana.
* Misaotra an'i Amira Al Hussaini noho ny fandikana ny lahatsoratr'i Zied